« Fragments », boky saripika : ahitana sanganasan’ny Malagasy telo | NewsMada
« Fragments », boky saripika : ahitana sanganasan’ny Malagasy telo
Nivoaka ny laharana faharoa amin’ny « Fragments », gazety boky miavaka amin’ny fanomezan-danja ny saripika, maneho ny aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Laharana faharoa izy ity ary ahitana ny sanganasan’ny mpanakanto malagasy telo.
Mpanakanto malagasy telo no indray nametraka ny aingam-panahiny sy ny talentany ao amin’ny gazety boky na “revue”, “Fragments” laharana faharoa, vao nivoaka tamim-pomba ofisialy omaly. Tsy iza ireo mpanakanto ireo fa i Rijasolo sy Henintsoa Rafalia, izay samy mpaka sary matihanina, ary i Johary Ravaloson, mpanoratra efa tsy zovina amin’ny maro intsony.
Manana ny mampiavaka azy ny « Fragments », izay maneho an-tsary ny zava-misy aty amin’ny ranomasimbe Indianina sy ny hakanton’ireo Nosy hita ao aminy, ka anisan’izany i Madagasikara. Araka izany, mibahan-toerana ny saripika ato anatin’ity « revue » ity. Na izany aza, mitondra ny fanazavana ny matihanina amin’ny fanoratana.
Tamin’ny laharana voalohany, tamin’ny taon-dasa, teratany renione avokoa ny mpanakanto nandray anjara tao anatin’ny “Fragments”. Niara-niasa sy namokatra tao amin’ny toerana iray, nandritra ny herinandro izy ireo. Ny vokatra azo tamin’izany no navoaka gazety boky.
Tamin’ity laharana faharoa ity kosa, notontosaina tany Antsiranana, ny 29 febroary hatramin’ny 9 marsa izany fiaraha-miasa izany. Marihina fa ankoatra ireto Malagasy telo ireto, nisy koa mpaka sary roa hafa: i Hippolyte sy David Lemor. Nanohana izao asa izao ny Alliance française any Antsiranana.
Ankehitriny, vita ilay “Fragments” laharana faharoa. Nampahafantarina omaly hariva, tetsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely ny fivoahany. Ankoatra izany anefa, ampirantiana ao hatramin’ny 24 septambra izao, ireo sary nalain’ireto mpanakanto matihanina ireto, miaraka amin’ny asa soratr’i Johary Ravaloson.